Meteran'ny ranon-drano (rano), Meteran'ny Radar ankehitriny sy Meteran'ny rano, Meteran'ny haavon'ny rano (rano) Shina, Meteran'ny Radar ankehitriny sy ny Meteran'ny Flow Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Metera fandrefesana
Ny metatra fandrefesana dia misy vokatra telo: ny haavon'ny rano (rano), ny metatra fikorianan'ny radar ary ny metatra mikoriana. Ity manaraka ity dia fampidirana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra:
1.Liquid (Rano) Level Meter: Izy io dia tsy mifandray planar milimetatra onjam-radar haavon'ny fandrefesana ny rano ambonin'ny haavon'ny fandrefesana, izay nandray ny frequency modulated mitohy onjam-radar (FMCW) teknolojia mba handrefesana ny ranon-javatra haavon'ny. Tsy misy fiantraikany amin'ny mari-pana amin'ny mari-pana, ny etona amin'ny rano, ny loto ao anaty rano, ary ny sediment mandritra ny fandrefesana; Ny algorithm optimized dia afaka manao ny valin'ny fandrefesana ho marina kokoa, izay manana ny toetran'ny habe kely, ny fametrahana mora ary ny fikojakojana ambany.
2.Radar Current Meter: Ny vokatra dia mampiasa K band planar microstrip array Antenna izay manana angovo fifantohana sy ambany fanjifàna herinaratra. Izy io dia tafiditra amin'ny fiasan'ny fanonerana ny zoro mitsangana, ny algorithm fanivanana ny hafainganam-pandeha, ny fahitana ny tanjaky ny famantarana, ny fifandraisana RS485 / RS232, ny fifandraisana tsy misy tariby ary ny hafa; Ny vokatry ny fandrefesana hafainganam-pandeha dia tsy misy fiantraikany amin'ny mari-pana sy ny tsindry rivotra, ary ny fitaovana dia tsy misy fiantraikany amin'ny harafesiny maloto sy ny fotaka, ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny fahasimban'ny rano. Tsotra amin'ny fanorenana sivily ary mora amin'ny fikojakojana; Ny famolavolana antena manokana dia mahatonga ny fanjifana herinaratra ho ambany dia ambany, mampihena be ny fepetra takiana amin'ny famatsiana herinaratra, ka mahatonga azy io ho mety indrindra amin'ny fametrahana eo amin'ny toerana itakiana ny fanaraha-maso ny tahan'ny fikorianan'ny fotoana maharitra.
3.Flow Meter: Izy io dia mandeha ho azy tanteraka mandeha amin'ny alalan'ny teknolojia microwave, izay natsangana K-band teknolojia radar fiaramanidina mba handrefesana ny hafainganam-pandeha sy ny haavon'ny rano amin'ny fomba tsy mifandray. Izy io dia manao kajy sy mamoaka ny fikorianan'ny fotoana eo noho eo ary ny fikorianan'ny fizarana amin'ny fotoana tena izy araka ny modelin'ny rindrambaiko sy ny algorithm. Ny vokatra dia manana ny toetra ny ambany fanjifàna herinaratra, avo azo itokisana sy mora fikojakojana; Ny dingan'ny fandrefesana dia tsy misy fiantraikany amin'ny mari-pana, ny antsanga, ny loton'ny renirano, ny zavatra mitsingevana ary ny antony hafa.
Ny faritra fampiharana ho an'ny metatra fandrefesana ny haavon'ny rano (rano), metatra mikoriana radar ary metatra mikoriana:
1. Meteran'ny haavon'ny rano (rano):
A. Fanadihadiana momba ny hidrôlôjia momba ny renirano, farihy ary fitahirizana;
B. Renirano, fantsona fanondrahana, fanaraha-maso ny tondra-drano ary fanaraha-maso ny haavon'ny rano;
C. Fanaraha-maso ny tondra-drano an-tanàn-dehibe, ny fitrandrahana rano ary ny fanaraha-maso ny haavon'ny rano;
D. Fanaraha-maso ny tondra-drano amin'ny faritra be tendrombohitra；
A. Fampitandremana mialoha sy fanaraha-maso ny loza ara-jeolojika;
B. Fanaraha-maso ny renirano sy ny loharanon-drano;
C. Fanadihadiana momba ny hidrôlôjia momba ny lalan'ny renirano, ny fantson-drano ary ny fifehezana ny tondra-drano;
D. Fiarovana ny tontolo iainana maloto, fanaraha-maso ny tambajotra fantsona fantsona ambanin'ny tany;
E. Fanaraha-maso ny tondra-drano an-tanàn-dehibe, fanaraha-maso ny tondra-drano avy any an-tendrombohitra, sns.
A. Fandrefesana ny hafainganam-pandeha, ny haavon'ny rano na ny fikorianan'ny renirano, farihy, onjan-drano, tobin-tsolika, fivoahana ara-tontolo iainana, tambajotra fantsona ambanin'ny tany, fantsona fanondrahana, sns;
B. Manampy ny fikarakarana rano, toy ny famatsiana rano an-tanàn-dehibe, ny fanaraha-maso ny rano maloto, sns;
C. Ny kajy ny fikorianan'ny rano, ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny fidirana sy ny fivoahana, sns.
Turbine Francis Vertical ho an'ny tobim-pamokarana herinaratra antonony sy lehibe